Clog's Dell (Clogging = Blogging Corporate) | Martech Zone
Dell's Clog (Clogging = Blogging Corporate)
Jimco, Juun 14, 2006 Talaado, July 4, 2017 Douglas Karr
Dell waxay bilaabeen xiritaankooda toddobaadkan, One2one. Waxaa jiray waxyaabo badan oo ku saabsan oo ku saabsan oo ku saabsan on blogosphere ah ... dadka qaar ayaa ammaanaya iyaga iyo qaar ka mid ah iyaga lynching. Ma hubo in qof wali qalinka ku duugay ereyga, laakiin waxaan jeclahay ereyga 'Clog' ee Shirkadda ama Blog Corporate. Waxaan ugu daray sidii eray aan shaki ku jirin oo ku saabsan wikipedia. Blog-yada shirkadu waxay noqon karaan duco ama habaar. Waxay u baahan tahay istiraatiijiyad iyo isku dheelitirnaanta qorayaasha wax qora ee ku lug leh sameynta Clog:
Ku habboon - ma bloggaagu u adeegaa warshadaha? macaamiisha? rajada? tartan?
Waqti ku habboon - markay wax xun ama wanaag dhacaan, ma balooggaagu qayb buu ka yahay istiraatiijiyadda degdegga ah ee ereyga looga gaadho?
Daacad - iyada oo aan la helin faahfaahinta gory, miyaad horfadhiisanaysaa akhristayaashaada mise waxaad ku dhejin doontaa lafdhabar?
Qiimo leh - ma caawineysaa ganacsigaaga mustaqbalka fog?
Xiritaanka ayaa laga yaabaa inay u muuqato wax yar oo diidmo ah, taasi ujeeddo ayey leedahay Waxaan rajeynayaa in ereygan la aqbalo adduunka oo dhan, maxaa yeelay ma hubo in xirxirantu ay tahay istiraatiijiyad wanaagsan shirkadaha. Taasi waxay tiri, ma dhahayo baloog garaynta ayaa uxun istaraatijiyad shirkadeed. Waa iska soo horjeedaa, waxaan u maleynayaa inay cajiib tahay. Si kastaba ha noqotee, waxaan u maleynayaa inuu jiro farqi aad u kala duwan oo u dhexeeya qorista iyo xiritaanka. Blogging-ka, shaqsigu wuxuu iska leeyahay codka wuxuuna si daacadnimo ah ugu cabirayaa dareenkiisa asaga oo aan ka walwalaynin wixii ku soo kordha. Clogging, dhinaca kale, waa inuu noqdaa codka wadajirka ah ee shirkadda. Waa la sifeeyey. Waa inay noqotaa.
Dell mar hore qaar baa helay jilicsan as sawiro oo ah laptop ka qarxaya Japan ayaan cinwaan looga dhigin shaygooda iyadoo wararka ku wareegaya barta internetka.
Khalad weyn! Maxay taasi khalad u tahay? Maxaad u dooneysaa inaad wax uga qabato adduunka oo laga yaabo in dad yar uun ay wax ka ogyihiin? Sababtoo ah haddii aadan sameyn, halista ku lug leh waa mid aad u weyn.
Markaad raadineyso barta internetka ee Dell hadda, waxaad ka heli doontaa Laptop Qarxa oo u dhow dusha liiska! Isweydii tan… markii aad ku dhex milantay cinwaannada cinwaanada natiijooyinka raadinta, ma ka heshay maqaal ka yimid One2one xiiso leh? Xitaa miyaad ka heshay liiska?
Aamusku waa dilaaga kalsoonida macaamiisha. Iyo adoo adeegsanaya blogging, shirkaduhu waxay bixiyaan warbaahin ay si wax ku ool ah ugula xiriiraan. Markay soo muuqan weydo ay blog marka hore, macaamiisha ogaan in si ula kac ah loo iska indhatiray. Natiija ahaan, xirmada waxaa loo arkaa mid aan khusayn, waqtigeeda, daacad ahayn oo aan qiimo lahayn.
Shirkada weyn ee VOIP ee looyaqaan Skype ayaa ku xigi doonta liiska. Dhawaan, qaar ka mid ah horumariyeyaasha Shiinaha waxay sheegteen inay dib u rogeen sirta sirta ee Skype oo ay adeegsadeen barnaamijyadooda si ay u garaacaan qof kale una ogeysiyaan cinwaankooda IP. Tani waxay saameyn weyn ku leedahay Skype, iyadoo su'aal gelineysa sirteeda. Halkii lagu weerari lahaa sheegashada, Skype si fudud ayaa loo diiday. Tani uma fiicnaan doonto dadka isticmaala internetka ee daalan. Waan ogahay inaanan rabin inaan khatar geliyo.
Marka, waa maxay Istaraatiijiyaddaada xannibaadda? Halkii aad ka hadli laheyd waxaad diyaar u tahay inaad laxiriirto dadka badan (iyo tartankaaga), maxaad tahay ma diyaar ma u tahay in laga wada hadlo? Waa mowduucyadaas oo soo noqon doona si ay kuu qaniiyaan!
Tags: xardhoxiridblog shirkadeedDell
Nielsen Isbarbardhiga tufaaxa iyo liinta, Podcasting to Blogging
Hoos u dhaca Telefishinka iyo Tusaalaha sida Webka uu u caawin karo
Agoosto 17, 2006 saacaddu markay ahayd 3:03 PM
Waan ogahay inay tahay cheesy laakiin waan jeclahay erayga xirxiran.
fadlan miyaad ka dhigi kartaa dougissmart dougissexy?
Agoosto 17, 2006 saacaddu markay ahayd 6:21 PM
dougissexy ayaa ku jirta! Kaliya waxaad ubaahantahay inaad faallo ka bixiso marar badan.